ထုတ်လွှင့်သည့်ထုတ်လွှင့်သောကင်မရာ - JVC 800 Series သည်တိမ်တိုက်သို့ခုန်ချသည်။ #IBCShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » တစ်ဦးကလွှအသံလွှင့်ကင်မရာ: အဆိုပါ JVC 800 စီးရီးမိုးတိမ်မှခုန် #IBCShow
တစ်ဦးကလွှအသံလွှင့်ကင်မရာ: အဆိုပါ JVC 800 စီးရီးမိုးတိမ်မှခုန် #IBCShow
ဒါဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သစ်ကို 800 စီးရီးရဲ့အတူ JVC Professional ကထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲများလှည့်နေသည် HD ကင်မရာလိုင်းကဒီအတိတ်မတ်လဖြန့်ချိခြင်းနှင့် IBC 2014 မှာမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ဆန်းသစ်သောအယူအဆ Zixi နည်းပညာစွမ်းအားဖြင့်အသစ်က JVC ထုတ်လွှင့်ဆာဗာကိုပါဝင်သော JVC Professional ကလွှန်ဆောင်မှုများ၏ကုမ္ပဏီများကကြေငြာချက်အားဖြင့်ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ ထို့အပြင်မတ်လအတွက်စီစဉ်ထားလွှတ်ပေးရန် $ 1,995.00 အမေရိကန်တစ်ဦးအကြံပြုစာရင်းစျေးနှုန်းရှိသည်လိမ့်မယ်, နှင့် JVC Professional ကလွှန်ဆောင်မှုများဖို့စာရင်းသွင်းမှုကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ cloud based ဖြေရှင်းချက် streaming များ၏အသုံးပြုသူ option ကိုအောင်မြင်မှုများဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်က်ဘ်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဖို့စွမ်းရည်ပဲစိတ်ကူးပါ!
"ဒီနေ့ရဲ့မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်ကြံ့ခိုင် 4G LTE ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုတိုက်ရိုက်များအတွက်လိုအပ်သော Bandwidth ကိုပေး HD လယ်ပြင်မှဗီဒီယို streaming များ, "Edgar ရှိန်, အင်ဂျင်နီယာ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ, JVC Professional ကထုတ်ကုန်များကဆိုသည်။ "Zixi နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်းမှတဆင့်ကျနော်တို့ထုတ်လွှင့်နဲ့ Web content တွေကိုထုတ်လုပ်သူများလေနှင့်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းပေါ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ကူညီပေးသည်တဲ့တည်ငြိမ်လုပ်ငန်းအသွားအလာပေးနိုင်ပါသည်။ "
တစ်ဦးလဲလှယ် Fujinon 850x zoom မှန်ဘီလူးများပါဝင်သည်သော GY-HM20 ကြည့်ယူပြီး $ 7,995 မှာစျေးနှုန်းစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝထောက်ပံ့ပေး, သုံး 1 /3"CMOS sensor: အဆိုပါကင်မရာနှင့်တူထိုကဲ့သို့သော features တွေကိုထောက်ပံ့ပေး HD 1920oMbps မှတက် 1080 × 60p မှတက် 264 နှင့် H.5 အသံသွင်း။ အဆိုပါ modular ဒီဇိုင်းကိုလယ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကောငျးမှနျစှာသင့်တော်ပါတယ်နှင့် Ka-M790G Multi-core ကိုစတူဒီယို interface ကိုချိတ်ဆက်မှုအတွက်ခွင့်ပြု studio- သို့မဟုတ် EFP ဇာတ်စင်များအတွက် RM-HP790 ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ယူနစ်ကိုကျွေးမွေးနှစ်ဦးစလုံးသော Ka-F790 စီးရီးအဝေးမှ Fiber Adapter ကိုမှ upgrade ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုသူ Dual-SDHC / အဆင့် SDXC မှတ်ဉာဏ် CAD MPEG-2 / AVCHD မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် Dual-codec မှာမှတ်တမ်းတင် slots- မှတဆင့်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာ ENG စတိုင်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် 4Mbps အထိမှာ Quicktime MOV, XDCAM EX သဟဇာတ MP264, AVCHD တိုးတက်ရေးပါတီနှင့် H.50 လွန်ကဲ High Quality အပါအဝင်ဇာတိ Workflows အဘို့အမျိုးစုံဖိုင် Format မှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ GY-HM90U ကိုလည်းလဲလှယ် Fujinon 20x zoom မှန်ဘီလူးများပါဝင်သည်ဒါပေမဲ့ဒီယူနစ် $ 9,995 မှာစာရင်းပြုလုပ်ထားသည်။ FALCONBIRD Image ကိုထုတ်ယူခြင်းအင်ဂျင်အဖြစ်မြင့်မားအမြန်နှုန်းမှာဗီဒီယိုကဒေတာပမာဏကို process နိုင်ကင်မရာများသည် 2D DNR အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် dynamic range ကိုကင်မရာကအလွန်အစိုင်အခဲရွေးချယ်မှုထုတ်လုပ်ဒီအရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်စေသည်! တည်နေရာရိုက်ကူးထံမှတိုက်ရိုက်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဒါအသုံးပြုသူကိုအသုံးပြုရန်ဖော်ရွေနဲ့ရိုးရိုး, ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း, လိုအပ်ချက်သင်ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းစတင် USB ကပူ interface ကိုတစ်ဦးကို Wi-Fi 4G-LTE ကို / 3G modem, ဒါမှမဟုတ် USB-RJ45 adapter ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်ဖြစ်ပါသည် တိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုတည်နေရာကနေကိုမိုဃ်းတိမ်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆာဗာ! နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ feature ကိုသင်သည်သင်၏ရိုက်ကူးသင်က Wi-Fi ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါတစ်ဦးက ISO / Android စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ပေါ်မှာအသက်ရှင်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောစံချိန်, ခေတ္တနားနှင့် zoom ကိုအဖြစ်ကင်မရာရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပိုင်း GPS စနစ်ယူနစ် built-in ဖြစ်ပါတယ် metadata ကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပစ်ခတ်မှုတည်နေရာသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ကင်မရာပါ!
"ကျနော်တို့ကအနာဂတ်မှာအသက်ရှင်သောဗီဒီယို streaming များနှင့်အပြည့်အဝကင်မရာသို့ပေါင်းစည်း FTP ကိုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူရှိယုံကြည်ပါတယ်သစ်ကို GY-HM890 နှင့် GY-HM850 နဲ့အတူသရုပ်ပြအဖြစ်," Edgar ရှိန်, အင်ဂျင်နီယာ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ, JVC Professional ကထုတ်ကုန်များကရှင်းပြသည်။ "4G LTE ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့် bandwidth ကိုအတွက်မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ဝန်ဆောင်မှုပေးထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျးယုံကြည်စိတ်ချရသောမြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုကယ်မနှုတ်နိုင် HD တစ်ခုတည်း modem နှင့်အတူ streaming ။ ဒီနည်းပညာယခုဤနေရာတွင်ဖြစ်ပြီး, တိုးခြင်းနှင့်တိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ "
အစွန်း JVC Professional ကထုတ်ကုန်ဖြတ်တောက်၏မိသားစုအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်လည်ပတ်: pro.jvc.com/prof/main.jsp ; IBC 2014 မှာ JVC မှာရှေးရှေးကနေအကြီးအထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသရုပ်ပြများအတွက်အားဖြင့်ရပ်တန့်ဖို့သေချာပါစေ!
အသံလွှင့်အတူ 2014 IBC ပြရန်သတင်း, IBC Show ကိုလွှမ်းခြုံနှင့်အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်းများက "သိမှာ" နေဖို့ရန်သေချာစေပါပေါ်မှမိနစ်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်ဖွင့်အားလုံးအတှကျမဂ္ဂဇင်း Beat!
Viz Vectar Plus - နယ်နိမိတ်မဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုထောက်ပံ့သည် - စက်တင်ဘာလ 22, 2020
ယခင်: Viaccess-Orcas IBC2014 ပြသခဲ့သည်သတင်းများ
နောက်တစ်ခု: Harris ကအင်စတီကျု: 25 နှစ်များအတွက်အခြေအနေ Quo စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့